नेपालको समय: २१:५८ | UK Time: 17:13
अमेरिकाले आइएसविरुद्ध लिबियामा पनि कारबाही गर्ने सङ्केत
वासिङ्टन, १६ माघ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आइएस विरुद्धको कारबाहीलाई लिबियामा पनि सुरु गर्ने सङ्केत गरेको छ । प्राप्त पछिल्लो समाचारअनुसार राष्ट्रपति ओबामाले आफ्ना सहयोगीहरुलाई लिबियामा पनि आइएस विरुद्धको कारबाही सुरु गर्ने विषयमा आवश्यक...
हेटाँैडा, १६ माघ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहिदले राष्ट्रको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र सुदृढीकरण र मानवअधिकार व्बहालीका लागि त्याग, तपस्या र बलिदान गरेकाले तिनको योगदानलाई सम्झना गरी राष्ट्र समृद्ध पार्न एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सहिद...
संघर्षशिल जीवन जिउनुको क्रम एउटै धरतीमा रहेर पनि आफ आफ्नै हुन्छ जिउने शैली, परिवेश, बाध्यता र अनुभूतिहरु ! यही क्षणभंगुर् जीवनमा समय भन्दा बलवान अरु के नै पो हुन सक्छ र ? यही समयको...
एक्सेसले प्लमस्टिड र अासफाेर्डमा माेर्गेज र ट्याक्सबारे सेमिनार गर्ने
लण्डन । एक्सेस फाइनान्सियल सर्भिसेजले प्लमस्टिड र अासफाेर्डमा माेर्गेज र ट्याक्सका बारेमा निशुल्क परामर्श गर्ने भएकाे छ । फेब्रुअरी १४ का दिन अाइतबार गेसाे हल प्लमस्टिडमा दिउँसाे १ देखि ४ बजेसम्म हुने सेमिनारमा...
वृद्धाश्रमका लागि लन्डनमा च्यारिटी हुंदै
लन्डन । दमक झापामा सञ्चालित रत्न आश्रमको सहयोगार्थ लन्डनमा च्यारिटी डिनर हुने भएको छ । आगामी अप्रिल ३० तारिख सांझ ह्यारोबरो फुटबल क्लवमा कार्यक्रम गर्न लागिएको संस्थापक मनमाया सुनुवार (आले) ले जनाइन् । उक्त...
अख्तियारद्धारा वैदेशिक रोजगार विभागमा छापा
काठमाडौँ, १५ माघ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाको काममा लापर्बाही गरेको र घुस लिएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज वैदेशिक रोजगार विभागमा छापा मारेको छ । सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको, श्रम स्वीकृतिलगायतमा...
काठमाडौं, १५ माघ । सरकारले आगामी डेढ वर्षभित्र भारतबाट तीन सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ । आज सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समितिस्तरीय बैठकले आगामी तीन साताभित्र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट...
काठमाडौँ, १६ माघ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना र पुनःस्थापनाका लागि जीवन अर्पण गर्ने सहिदको सम्झनामा काठमाडौँको गोकर्णमा सरकारले निर्माण गर्न लागेको राष्ट्रिय सहिद स्मारक अलपत्र बनेको छ । ‘लोकतन्त्र, शान्ति र राष्ट्रिय एकताका लागि...
एक साताभित्र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ, १५ माघ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ऊर्जा प्रवद्र्धनका आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमसहित एक साताभित्र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ । नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्था (इप्राड)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन...
लन्डन । प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई नेपाल लैजान प्रयास गरिरहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सोमबार टेन डाउनिङ स्ट्रिट जाने भएको छ । क्यामरुनले सोमबार दिउसो एकबजे समय दिएको कार्यक्रम संयोजन गरिरहेका राजाराम गिरीले जानकारी दिए । सुरक्षाका...
« अघिल्ला 1 … 848 849 850 851 852 … 1,139 पछिल्ला »